Hoolka Xusuusta Ozaki Shiro
Maareynta macluumaadka shaqsiyeed
Websaydhkan (hadda ka dib loo yaqaan "degelkan") wuxuu adeegsadaa teknoolojiyada sida 'cookies' iyo astaamaha loogu talagalay ujeeddada hagaajinta isticmaalka boggan macaamiisha, xayeysiinta ku saleysan taariikhda marin u helista, la qabsashada xaaladda isticmaalka boggan, iwm. . Adiga oo gujinaya batoonka "Oggol" ama boggan, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka ujeeddooyinka kor ku xusan iyo inaad la wadaagto xogtaada wada-hawlgalayaasha iyo qandaraasleyaashayada.Ku saabsan maaraynta macluumaadka shakhsiyeedQaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota WardFadlan tixraac.
Waan ku raacsanahay
Ku saabsan tarjumaadda
Boggeena waxaa lagu turjumay adeegsiga tarjumaada otomaatigga ah.Fadlan ogow inaanan masuuliyad nala saari karin wixii khaladaad ah ee dhici kara oo ka dhalan kara tarjumaad farsamo.
Waa maxay Hoolka Xusuusta Ozaki Shiro?
Furan maanta 9: 00-16: 30
Ku saabsan xeeladeena cusub ee coronavirus
Bandhigga Hoolka Xusuusta ee Ozaki Shiro
Waxaad dib u soo ceshan kartaa gurigii hore ee aad ku nooleyd 10-kii sano ee ugu dambeysay oo aad ka daawan kartaa banaanka.Waxaa u sii dheer qoraal gacmeedyo (soo saarid) iyo buugaag, waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaa la soo bandhigayaa.
Ogeysiisyada & Mawduucyada
2021 / 08 / 01 JaaliyadMajaladda Macluumaadka "Farshaxanka Farshaxanka" ayaa soo baxay bishii Abriil / Maajo
2021 / 07 / 27 kaleKu saabsan joojinta hadalka XNUMX dhismaha dhismaha
2021 / 07 / 01 JaaliyadOta Ward Macluumaadka Farshaxanka Dhaqanka "ART bee HIVE" vol.7 ayaa la daabacay.
2021 / 06 / 10 kaleHydrangea ayaa ku jirta ubax buuxa.
2021 / 04 / 20 kale"Xusuusin Hall Hall" (Lambarka XNUMX) waa la daabacay
Shiro Ozaki, oo loo arko inuu yahay qofka ugu muhiimsan tuulada Bunshi Magome, ayaa dib u soo ceshaday gurigii uu ku noolaa 1964 sano ilaa uu ka dhinto 39 (Showa 10) wuxuuna u adeegsaday hool xusuus ah.Shiro wuxuu u dhaqaaqay aaga Sanno sanadkii 1923 (Taisho 12) wuxuuna helay boos adag oo ah qoraa caan ah sababo laxiriira "Tiyaatarka Nolosha".
Hoolka 'Ozaki Shiro Memorial Hall' waxaa la furay bishii Meey 2008 si loogu soo bandhigo Shiro gurigiisii ​​hore (qolka martida, daraasadda, maktabadda, beerta) si loogu gudbiyo nolol ku noolaanshaha Magome Bunshi Village ilaa jiilka dambe.Waxaan rajeyneynaa in dad badani ay u isticmaali doonaan hoolkan xusuusta aagga xasilloon oo leh cagaar fara badan saldhig cusub oo laga helo sahaminta Magome Bunshimura.
Socdaal ficil ah
Panorama waxay ka koobantahay muuqaal iyadoo la adeegsanayo kamarad 360-degree ah.Waxaad kuheli kartaa booqasho dalwadal ah Hoolka Xusuusta ee Ozaki Shiro.
Shaqooyinka iyo qolalka bandhigga Shiro Ozaki Hall Hall, waxyaabaha Shiro jecel yahay, iyo sawir gacmeedka hoolka xusuusta.
Saacadaha ay furantahay
9:00 ～ 16:30
* Ma geli kartid dhismaha
Fasax-sannadka iyo Sannadka Cusub (Diseembar 12-Janaayo 29)
Si ku meel gaadh ah ayaa loo xidhay
Ku saabsan ururka
Siyaasadda marin u helka websaydhka
Xuquuqda qoraalka (C) Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward. All Rights Reserved.